“युवा विदेश पलायन भै रहने हो भने देश कहिलै विकास हुँदैन” « Khabar24Nepal
“युवा विदेश पलायन भै रहने हो भने देश कहिलै विकास हुँदैन”
दिपक थापा पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
युवा शक्ति कुनै पनि देशको राजनैतिक¸ आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको संवाहक छ । यो समूह जनसङ्ख्याको सर्वाधिक सक्रिय¸ उर्जावान र गतिशिल समूह पनि हो ।
यो मानव संसाधन विकासको प्रमुख साधन , युवा राष्ट्रिय विकासका प्रमुख मानव स्रोत र साधन भएकोले यिनको विकास नभै देशको विकास असंभव छ । हरेक राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । युवा जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक विकासका माध्यमबाट अहिलेका विकसित तथा विकासशील राष्ट्रले विकास निर्माणमा प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । हरेक देशको विकास र प्रगतिमा युवाको योगदान नै प्रमुख हुने गरेको छ। यसबाट नेपाल युवा जनसाङ्ख्यिक लाभांशबाट फाइदा लिई समृद्धि र विकासको सुनौलो युगमा प्रवेश गर्नसक्ने अवसरको अवस्थामा रहे पनि राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन सकेको छैन । तथापि हालका केही वर्षमा युवा विकास¸ उद्यमशिलता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा आशालाग्दा संकेतहरु छन् । तर सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
यूवाहरु नेपालमा बेरोजगार भएपछि रोगगाररको लागि सरकार संग पासपोर्ट किनेर विदेश जान बाध्य हुन्छन् । विदेश जाने शिलशिलामा कयौं दुःख कष्ट बेहोर्न पर्छ । कति त भिजा नलाग्दै ठगिन्छन् । कति भिजा लागेर ठगिन्छन् । राजनितिक दलहरुले फेरी शासन गरे तर देश र जनाताको जीवन शैली कहिलै परिवर्तन भएन । तर नेताहरुको जीवन शैली कहाँ पुग्यो ? देश लाई गरीब बनाएर आफु दानि भए; लाखौं युवाशक्ति खाडी लगयत अन्य मुलिक पठाउन पास्पोर्ट बेचेर कसैले दिएको अनुदान र सहयोग बाट देश चल्दैन र बिकास पनि हुँदैन । कसैसँग मागेर पनि देश चल्दैन । रिमिटेन्स र कसैले दिएको सहयोग बाट देश चल्दैन !
यती सुन्दर देश नेपाल जम्मा जम्मी ३ करोड नेपाली भयको देश प्रत्येक नेपाली आफ्नै देशमा रोजगार गर्ने हो भने देश बिकास हुन समय लाग्दैन । जुन बेवस्था आएनी दलाली पुजिपती नै हाबी भाई रहने हो भने देश बन्दैन । ठगी र भस्ट्रचार कालोबजरी दलालहरु राजनीतिकमा हाबी हुँदा नेपालगरीबिको घेराभित्र भाईरहेको छ।
देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने हरुको राजनीतिले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । मात्र आफ्नो आफन्तको परिवर्तन गरे ।
सरकारभन्दा बलियो पुजीँपती र दलाल वर्ग बनेका छन् ।
सरकार सीमित हुनुपर्छ तर स्थिर र शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले राख्छ तर सरकार आफ्ना नीतिनियम कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बलियो हुनुपर्छ । बहुमतीय सरकारको अभावमा देशको विकास हुन नसकेको ठानेर जनताले वर्तमान सरकारलाई झन्डै दुईतिहाई मत दिएर ५ वर्षसम्म सरकार चलाउने साँचो हस्तान्तरण गरे । वर्तमान सरकार बनेपछि जनतामा नयाँ उत्साह र आशा ह्वात्तै बढेर गयो । वर्तमान सरकार गठन भएको झन्डै ८ महिना पुगेको छ । तर सरकारले अपेक्षित ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन । किनकी सरकार स्थिर त छ तर शक्तिशाली बन्न सकेको छैन । सीमित पुँजीपती वर्गको पञ्जामा सरकार परिरहेको छ । दलाल र पुँजीपतीहरूले सरकारलाई टसमस गर्न दिईरहेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि आफूलाई काम गर्न नदिएको र कसैले पनि सहयोग नगरेको भन्ने अभिव्यक्तिले पनि यही सङ्केत गर्छ । दलाल पुँजीपति वर्गको दबाबसामु सरकार निरिह हुनुपर्ने अवस्था छ । जहाँ-जहाँ सरकारले काम गर्न हात हाल्छ त्यहाँ सरकारले अपेक्षित नतिजा हाँसिल गर्न नसक्नु पनि यही कारण हो । चाहे यातायात सिन्डिकेटको क्षेत्रमा होस, चाहे बजारभाउ नियन्त्रणका कुरामा होस, चाहे शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने कुरामा होस सरकारलाई बाह्य क्षेत्रबाट थोरै पनि सहयोग भइरहेको देखिँदैन ।vकर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेका देश विकासका लागि विकास व्यवस्थापन सबल हुनुपर्छ ?
विकास व्यवस्थानपनको नेतृत्वकर्ता कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्यमा हुनुपर्छ । तर नेपालमा न विकास व्यवस्थापन सबल छ, न कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार चन, न भ्रष्टाचार कम छ । तिनवटै कुरामा नेपाल कमजोर हुँदा देशको विकासले गति लिन सकेको छैन ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कार्यालय आलोकनगरमा रहने
कामका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हटाउने छौँ : मुख्यमन्त्री भट्ट
सत्तारुढ गठबन्धनमा डा भट्टराईको पाँच बुँदे सुझाव
ISC CISSP Exam Dump Sale
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै
आजको मौसम : मेघ गर्जन सहित वर्षा